नारायणीपारि सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ, तीमध्ये धेरैसँग लालपुर्जा छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा सीमापारिका बासिन्दाले नेपालीलाई त्रासमा राखेका छन्, कहिले कुटपिट गर्छन्, कहिले घरमै आगो लगाइदिन्छन् । भारतबाट प्रताडित र नेपालबाट उपेक्षित सुस्ताको जीवन सधैँ आपत्विपत्मा छ ।
१२ वर्षअघि रौतहट राजपुर फरहदवा–४ स्थित शेख इद्रिसको टहरोमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इन्जेक्सन लगाई बेहोस पार्ने डाक्टरको परिचय खुलेको छ ।
सुदूरपश्चिमका राज्यमन्त्री ठगी र किर्ते मुद्दामा फरार
ठगी र किर्ते मुद्दामा फरार रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक मन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन अघि बढाएको छ ।
राज्यमन्त्री नै ठगी मुद्दामा फरार, पूर्वमन्त्री ज्योती पक्राउ, जेलमै यौनसुविधा
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्वमन्त्री ज्योती पक्राउ उद्योगपति एवं पूर्वमन्त्री रुप ज्योती पक्राउ परेका छन् ।
जहाज सधैं ढिलाे उडान, यात्रु हैरान
दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान ९० वटासम्म हुन्छ भने आन्तरिक उडान औसतमा तीन सयवटासम्म पुग्छ। यति व्यस्त विमानस्थलमा थोरै समस्या उत्पन्न हुनेबित्तिकै उडान डिले हुन्छ।
महिला मुद्दाको प्रचारमा ट्रम्पकी छोरी
विकासशील मुलुकमा महिला सशक्तिकरण मुद्दाको प्रचारमा लागेकी डोनल्ड ट्रम्पकी छोरी इभान्का यतिबेला मोरक्को पुगेकी छन् ।
पोखराकी विद्या पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कै लाइनमा
उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की उम्मेदवार विद्या भट्टराई बिहीबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा छाएकी छिन् ।
ठमेलमा बालुवाटारकाे जग्गा काण्ड भुलाउने अर्काे काण्ड, याेगेश भट्टराई पनि जाेडिए
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
आलमलाई न्यायाधीशले सोधेका ५२ प्रश्नकाे सवालजवाफ
राजपुर बम काण्डसम्बन्धी मुद्दाका आरोपी नेपाली कांग्रेसका नेता मोहमद आफताब आलमले बयानमा आफुलाई अप्ठ्यारो हुने प्रश्नको जवाफ अस्वीकार गरेका छन्।
कृष्णबहादुर महराको राजीनामालगत्तै पत्रकारको प्रश्नमा सुवास नेम्वाङले भनेका थिए– म सभामुखको दाबेदार होइन ।
भारतले नेपालीभूमी फेरि अतिक्रमण गरेको भन्दै युरोपभर विरोध भइरहेको छ । युरोपमा रहेका नेपालीहरुले नेपालीभूमी नयाँ नक्सामा गाभेको भन्दै भारतविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई २० लाख डलर जरिवाना
अमेरिकाको एक अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई जरिवाना सुनाएको छ । न्यूयोर्कका एक न्यायाधिशले ट्रम्पलाई आफ्नो च्यारिटी संस्थाको रकम अवैध रुपमा प्रयोग गरेको अभियोगमा २० लाख डलर जरिवानाको आदेश
के साधु बन्न मुक्तिनाथ पुगेका हुन् त पारस ?
पूर्व युवराज पारस शाह मुक्तिनाथ पुगेर मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन् । साथीहरुसँग मुक्तिनाथ पुगेका उनले मुक्तिनाथमा विधि पुर्‍याएरै पूजा अर्चना गरेका हुन् ।
सन्चारकर्मी रबि लामिछाने ले आफ्नो देश को सिमा भारत ले मिचेको भन्दै आक्रोश भएका छन । भारत ले नेपाल को सिमा मिचेको एतिबेला सामाजिक संजाल मा निकै नै भाईरल भएको छ ।
विप्लव नेकपाद्वारा १४ स्थानमा मसाल जुलुस !
सरकारद्वारा प्रतिबन्धीत नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव ) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशका विभिन्न ठाउँमा मसाल जुलुस बालेकाे छ ।
नेपालका सिमामा यसरी ढलेका छन जङ्गे पिल्लर ! याे समाचार सिंहदरबारसम्म पुर्याउन सेयर गरौँ
नेपाल भारत सीमामा जङ्गे सीमाखम्बा ढलेका छन । नेपालको तर्फबाट ती खम्बा उठाउने र संरक्षण गर्नेमा ध्यान नपुगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सीमाविद्हरुले यसको आवाज उठाइरहेका छन ।
मोदी तिम्रो पाराले, दुख पाए साराले !
भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विरोधमा विद्यार्थीहरुले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको उत्तरी कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागकै रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि कञ्चनपुरका युवा विद्यार्थी संगठन भारत विरुद्ध निरन्तर बिरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन ।
लिपुलेकबारे थापाले मुख खोले, बालुवाटारमा खुशीयाली !
नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक र कालापानीबारे मुख खोलेका छन् ।
पूर्व सभामुख महराले लिने भए अब यस्तो बाटो –के गर्ला उच्च अदालतले ?
पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरा अदालको आदेशको विरुद्धमा उच्च अदालत जाने भएका छन्। संसद सचिवालयकी कर्मचारी बलात्कार आरोप लागेका पूर्वसभामूख महरा अदालको आदेशको विरुद्धमा उच्च अदालत जाने भएका हुन्।
विद्या भट्टराईको ‘झोला’ बोक्ने व्यक्ति को हुन ?
माथी देख्नुभएको फोटो समाजिक संजालमा सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वत्र नकारात्मक विचारहरु देखिन थाले। धेरैले ‘झोले’को उदाहरण समेत दिन थाले । जसको मनमा जे आए त्यही समाजिक संजालमा लेखे। अधिकांश समाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले नकारात्मक कमेन्ट गरेको देखिन्छ। किनभने, त्यो फोटोको वास्तविकता धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ।
अबदेखि कैदीलाई जेलमै यौनसुविधा दिइने
अब पति वा पत्नीले जेलभित्रै यौनसुख पाउने भएका छन् । सन्तान सुखबाट समेत कारागारमा रहेकाहरुले वञ्चित हुनुनपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू हुन लागेको हो ।
भारत मात्रै हाेइन चीनले पनि ११ ठाउँमा सीमा मिच्दा कम्युनिस्ट सरकार चुप
भारतले सिमा मिच्दा मधेशबादी दल किन मौन ?
भारतले नेपालको भूमिसहित आफ्नो दावी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी पार्टी मौन छन्। मधेस केन्द्रित दलले अहिलेसम्म व्यक्तिगत वा पार्टीको कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बाँदर नै बसको ड्राइभर भएपछि
तपाईले बाँदरलाई मानिसको नक्कल गरेको देख्‍नु भएको छ होला तर के बस चलाउँदै गरेको देख्‍नु भएको छ? भारतको युपीस्थित बरेली शहरमा पार्किङमा राखिएको बसलाई चलाएर देखाएका छन्।
कालापानि हाम्रो हो अनि लिपु लेकपनि हाम्रो नै हो हो तिमी हामी भन्दा २२ गुना ठुला छौ तर याद राख हामी तिमी भन्दा २२ गुना बलिया छौ। यो पनि सुन सानो हुनु कमजोर हुनु होइन गरीब हुनु भिकारी हुनु होइन । जे खाइरहेछौं, किनेर खाइरहेछौं । तिम्रो हस्तक्षेप र धम्की हामीलाइ कदापी स्बिकार्य छैन ।
नेकपा धरानमा भाडभैलो
धरान उपमहानगरपालिकाको रिक्तरहेको मेयर पदमा स्वर्गिय तारा सुब्बाको पत्नीले दाबी गरेकी छन् ।
भारतका एक अधिकारीले कालापानी अहिलेमात्र भारतको नक्सामा नरहेको दावी गरेका छन् ।
पानीमा दलालीको चलखेल, मुहान बेच्न हानाथाप, स्थानीय तह मुकदर्शक !
गाउँमा आउने पैसा खानका कै लागि बन्ने विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुले पानीका मुहान समेत किनबेच गर्दा आम सर्वसाधारण प्रभावित बन्न थालेका छन् ।
पानीको मुहानको संरक्षणका लागि खानेपानीका मुहान दर्ता गर्ने नीति सरकारले लिएको भएपनि स्थानीयस्तरमा पैसा कमाउनका लागि पानीका मुहान नै किनबेच हुने गरेका छन् ।
भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध इलाममा विरोध प्रदर्शन
भारतीय आधिकारिक नक्सामा नेपाली भूमिलाई समावेश गरेर प्रकाशन गरिएको विरोधमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) इलाम नगर कमिटीले शुक्रबार इलाम सदरमुकाममा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
दास स्वतन्त्र भएपछी मालिकको नक्कल गर्छ - रंजित तामांग
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा २ वटा विमान आपसमा ठोक्किए
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा २ वटा विमान एक आपसमा ठोक्किएका छन् । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्ने क्रममा श्री एयरलायन्सको विमानले यति एयरलायन्सको विमानलाई ठक्कर दिएको हो ।
युरोपा लिग फुटबलको अन्तिम ३२ मा म्यान्चेस्टर युनाइटेड
म्यान्चेष्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबलको अन्तिम ३२ मा प्रवेश गरेको छ ।बिहीबार राति भएको समूह एलको खेलमा सर्वियन क्लब पार्टिजन बेलग्रेडलाई ३–० गोल अन्तरले हराउँदै युनाइटेडले अन्तिम ३२ मा आफ्नो स्थान बनाएको हो ।
मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) सँग नेपालले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । काठमाडौंमा भएको पहिलो श्रेणीको तीन दिवसिय खेलमा नेपाल एमसीसीसँग २ सय ८ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो ।
शक्तिशाली भूकम्पमा परि पाँच जनाको मृत्यु
इरानको उत्तरपश्चिम प्रान्त इस्ट अजरबैजानको तार्क क्षेत्रमा शुक्रबार भूकम्प गएको छ ।स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार बिहान २ः१७ बजे गएको यस भूकम्प ५.९ म्याग्नीच्युडको मापन गरिएको इरानको भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ ।
अनुसन्धानमा तानिए: पक्राउ गर्न इन्टरपोललाई पत्राचार